မေလေးနိုပါ — MYSTERY ZILLION
January 2009 edited February 2009 in မိတ်ဆက်
ဟုတ်ကဲ့ပါ မမရေ ကြိုဆိုပါတယ်နော်။ ကျနော်တို့က မိန်းကလေး members တွေ active ဖြစ်အောင် motivate လုပ်ပေးချင်လို့ဝိုင်းဝန်းကြိုဆိုကြတာနော်။ အဲဒါ ဘေးပြောတာကို မယုံနဲ့ ခွေးပြောတာကိုယုံ (တနည်း) ချာလီပြောတာကို မယုံနဲ့ ပါပီပြောတာယုံ (ဒါမှမဟုတ်) ချော့ပြောတာကို မယုံနဲ့ dog ပြောတာကိုယုံ။:D အကူအညီလိုရင် ဒီဖုန်းကိုဆက်လိုက်နော် 119
အမ မေလေးနို ကိုသားကလဲကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
နာမည်တွေ က တော့ ဖလန်းဖလန်းလေးတွေနော် နောက်ပိုင်းမမတွေက ဟိဟိ :d:d
သားနာမည်က ဇေယျာပါ လမ်းတွေ.လဲခေါ်နိုင်ပါတယ်
January 2009 edited January 2009 Moderators
မေလေးနိုကို ရေလေးလို ချိုပါစေလို့ :d မှားကုန်ပီ ဘာမှလည်းဆိုင်ဘူး..........
မမေလေးနိုကို ကျွန်တော်ကလည်း ကြိုဆိုပါတယ်......:d:d:d:d
ကြိုဆိုပါတယ် မ မေလေးနိုရေ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုကို၀င်းပါ။ ခင်ပါနော်။ ကျွန်တော့် မေးလ်က [email protected], [email protected] ပါ။ အစ်မ မေးလ်လေးလဲသိပါရစေနော်။ ကျွန်တော့်ဆီ လာလည်ဦးနော်။
:Pမင်္ဂလာပါ....တခုမေးပါ၇စေ..မေလေးနို ဆိုတာနာမည်အ၇င်းလားခင်ဗျာ.....BEHSkamayut ကျောင်းသူပါလားခင်ဗျာ..
ကျွန်တော်မောင် Orbs.7 မှလည်း နွေးထွေးပျူငှာစွာ ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ညာ.....:6:
ကျွန်တော် piglay ကလည်း
Warmly Welcome from MZ.
Have great times with MZ.
ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ ... မင်္ဂလာပါ။
Dear Sis !! :103:
You are warmly welcomed to MZ.
MZ Policies Admin should developavery special policy for Female Member !!
Lady First Policy )
I think all Male Members will recommend and welcome that policy !!
Dear Sis !!!! It is justajoke !!! Learn and Share in MZ.
Cheer !!!! )
ရေကဘယ်မှာချိုလို့တုန်း ကိုယ့်အချစ်တုံး ပြုံးလေး သကြားခပ်လိုက်တာများလား။:d
ကြိုဆိုပါတယ် မမေလေးနို။ ဒီဖိုရမ်မှာတော့ မောင်ပြုံးက အချောဆုံးပဲ။ အသက်က အခုမှ 16 နှစ် မပြည့်တပြည့်။ MZ ရဲ့ ကင်းလေးကင်းမှာ သူက တကင်းပါ။
(ပြုံးလေး ညကျရင် မုန့်လိုက်ကျွေးရမယ်နော်)
Warmly welcome to MZ :6:
Haveagreat time with MZ:))